Ukuphela kwehlabathi 2012 Kuthekani ukuba iiMeya zilungile? - Geofumadas
Ukuphela kwehlabathi 2012 Kuthekani ukuba ama-Mayans ayelungile?
Ukuphela kwehlabathi 2012 Kuthekani ukuba iiMeya zilungile?
NgoDisemba, 2012 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ndinomhlobo endinomdla wokucacisa ngaye malunga neyelenqe lokwenyani lezopolitiko zethu emsebenzini kunye nokucinga ngeenkolelo zabantu bethu.
Enye yazo yile yokuba amaMayin axela kwangaphambili kumjikelezo wawo weakhawunti, ukuba emva kweminyaka eyi-5,125 umhlaba uzakuphela, ubhalwe kwi-21 ka-Disemba ka-2012 kwaye emva kwexesha abantu be-Era eNtsha kunye ne-Gnostics banike Imeko emnandi yomhla wokuzonwabisa. Ngokuphathelene noku, ndithandile kuhambo lwam lokugqibela ukuya eGuatemala isibhengezo sobuchule kwisikhululo seenqwelomoya esathi: “I-2012 ayisiyonto. Yindawo", Yikuphi ukhenketho oluye lajika amehlo alo ukuze kuzuze uqoqosho lwengingqi kunye nenkcubeko.
Ngoko, apha izikhundla ze-4 malunga nokuphela kwehlabathi leMeya:
1 Okokuqala, intlonipho yam ngale nkcubeko xa uphuhliso best yophando lwenzululwazi eYurophu babephikisana umhlaba ngeenxa zonke, nto ichazwa ikhalenda yaba ngumsi yonke iphela, kuba ikhweyitha okhethekileyo ingqamana ngongoma xa inkqubo elanga idlula phezu ezimanyeneyo iMilky Way.
Ngokungafani nevili lekhalenda ye-52 iminyaka isasetyenziswa namhlanje phakathi kweeMeya, ixesha elide linomgca, lijikeleze i-cyclical, kwaye libalwe ixesha kwiiyunithi ze-20: iintsuku ze-20 zenza uqobo, I-18 uinales (iintsuku ze-360) yenza kuluhlu, Iingoma ze-20 zenza ikatun, kunye ne-20 katunes (iintsuku ze-144 ze-000) zenza malunga ne-ebakunun. Ngale ndlela, umhla we-Mayan 8.3.2.10.15 ubonisa i-8 baktunes, i-3 katunes, i-2 tunes, i-10 uinales kunye ne-15 iintsuku.
Andikwazi ukucinga ngombono wokuba bafike njani kuloo nto, ngokujonga nge-stellar, ngaphandle kobungqina obukhoyo beeteleskopu okanye izixhobo ezinokubanceda ukurekhoda isikhundla ngokuchanekileyo. Kwaye emva kokubona imibhalo emininzi esezantsi kunye neetempile ezinamatye ayo kubonakala ngathi anqunywe ngemitya ye-laser kwaye ibekwe ngemigca yokuchaneka okuphezulu. Njengomntu wenzala yabo, ndiziva ndinelunda malunga nelifa labo, nangona ixesha libonisile ukuba, ukuba benza isifundo sesifundo sezinto zakudala, baya kufumanisa ukuba isiko labo lokwakha umzi kwelokuqala, abezopolitiko bethu baliphatha kwiDNA kwaye ke ngoko bayitshabalalisa elungileyo Iingcamango zeminyaka yonke ye-4 kurhulumente, uyibuyisele nakwabanye abakumgangatho ophantsi kunye nezinye iinwele ezitsaliweyo.
Kwaye nangawo onke amandla ezenzululwazi, ukuxela kwangaphambili imihla ekude; nokuba bashiye kwisikhala esikhala okanye abanakuxela kwangaphambili ukuba ukutshabalalisa indalo bekuya kuba kukuwa kwempucuko yabo. Into ekubonakala ukuba bayayiqikelela ngoba kwiminyaka embalwa inokwenzeka kuyo yonke iplanethi; into ekungekho mntu unokuyiphosa nokuba kutheni kungekho mntu wenza nantoni na.
Ukuba kukho into enomdla kule nto, kukuthi isigqubuthelo semfihlelo yale nkqubo kunye neminye imiphakathi iyasiqinisekisa ukuba kuninzi abanye abantu abazi ngaphambili, kwaye emva kwexesha asizange sifunde ukufunyanwa kwakhona okanye ukubuyisela kwakhona.
2 Okwesibini, isiqingatha sezi zinto yimveliso yokucinga.
Ukuba singahamba iminyaka eyi-2,500 ngaphambi kokuba uKrestu aye eCopan, sidibene notat'omkhulu kaMarcel Pérez sambuza ukuba i-21 / 12 / 2012 ibithetha ntoni kubo, angathi: "Khangela imijo, ngoku ngoku ndixakeke kakhulu ukuzama ukuphanda imihla ephathelele imvula, kuba ukuba andizenzi nto siyafa yindlala"
Le ayisiyonto intsha, kusoloko kukho ukuqikelela kokuphela kwehlabathi. Umongo we-apocalyptic kutsha nje udityaniswe ngalo mhla kaMeyi, obuye ubonakale nakweminye imekobume efanayo. Njengangaphambili ngaphambi kwe-1999, akukho nto yenzekileyo; xa i-Y2K ekuphela kwento eye yandishiya ndizisola kukuba i-SAICIC 3.1 ye-DOS ayisakwazi ukwenza uqhushumbo lokufaka. Kodwa akukho nto intlekele yenzekileyo.
Kodwa kufuneka ndivume ukuba iyahlekisa kakhulu, umntu uyazithanda ezi pod. Ndayithanda imovie "Yazi", ndandiwonwabele ngebhanti ye-Photonic kwaye ndiyazi ukuba isizukulwana sachaza ukuba isijikelezi-langa sasine-planethi ebizwa ngokuba yiHercobulus, ene-orbit yayo ekwenye indiza kodwa ngala mhla kuxhomekeke kuyo ukuba idlule ... kwaye nangona kufanele ukuba sele sinayo ubonwa ngeeteleskopu zethu ezibalaseleyo, ziya kunika iplanethi kumama ngaphantsi kweentsuku ze-12.
3 Okwesithathu, masibunandiphe ubomi.
Le 20, ndinenye yeentlanganiso zokugqibela xa ndiza kuba kunye neqela lam lonke lesimu. Okulandelayo andizokwazi ukuba nazo zonke kwaye kwakhona ndiyakuxelela ukuba le ngxaki yaseSpain iye yasikwa ngandlel 'ithile. Kodwa kwakhona ndiza kukubulela ngokuguqula iinjongo zakho ezilungileyo zibe zizakhono zobugcisa ozisa ngazo kuphuculo olungaphezulu koomasipala be50 ... makube ngumlinganiselo wetheyiphu, kunye nesirekhodi se-cadastral, ikhaltyhuleyitha okanye isikhululo seerobhothi.
Emva koko ndiya kuvuya nekhefu kunye nabantwana bam, ndiya kulala ngotshani kwaye xa uphoswa phezu kwam ndiya kukhumbula ukuba:
... baphile ngelo xesha, akukho xesha sokukholelwa ukuba Mayans banyanisile. ... kwaye ukuba benza, akukho Internet, akukho satellite, akukho mbane, akukho Twitter okanye egeomates ... akukho indlela yokunxibelelana.
Uyabona apha i-22, xa ndinethemba lokukhulula izibikezelo zam ezobuchwepheshe ze-2012 kunye neenjongo endizenzayo kubantwana bam kunyaka oya kuba ngcono ngakumbi.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuqonda ingqiqo BIM, kwimeko Bentley Systems
Post Next Ezinye iziganeko zeengxaki zezopolitiko eHondurasOkulandelayo "